"The wait operation timed out" error ကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းရပါမလဲ? — MYSTERY ZILLION
"The wait operation timed out" error ကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းရပါမလဲ?
ASP.net ကို Microsoft SQL Server ပြီးသုံးရတဲ့ Project တခုမှာ အပေါ်က "wait operation time" Error တက်လို့ Google ရှာကြည့်လိုက်တာ သူတို့က exec sp_updatestats ကိုထဲ့လိုက်ရင် ဖြေရှင်းနိုင်သွားတယ်လို့ရှင်းထားတာတွေ့တယ် ။ exec sp_updatestats ကဘာလဲဆိုတာသေချာမသိတော့ အရမ်းမလုပ်ရဲဘူးဖြစ်နေတယ် ။ ရှာတော့ရှာကြည့်သေးတယ် ။ ဒါပေမဲ့ သိပ်နားမလည်ဘူး သူတို့ရှင်းထားတာကို ။ တကယ်ဘဲ အဲဒါကို Run ရင်အဆင်ပြေနိုင်လားလို့ ။ ကြည့်ရတာ MSSQL Server မှာ Run ရမှာထင်တယ် ။ ကျေးဇူးပြုပြီး ဘာလို့ ဒီError တက်ရတဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေနဲ့ အဲဒီ exec sp_updatestats ကိုRun လိုက်ရင် ဘာအကျိုးကျေးဇူးဖြစ်လဲ ဆိုတာ နဲ့ ဘယ်မှာသွား Run ရမလဲဆိုတဲ့ အသေးစိတ်ကို သိခွင့်ရနိုင်မလား ?
ဒီလင့်ကတော့ Google တုန်းကတွေ့ထားတဲ့ exec sp_updatestats ကိုသုံးရင် အဆင်ပြေမယ်လို့ပြောတဲ့ လင့်ပါ ။
Error code ကဒီလိုပါ ။
wait operation timeout ဆိုတာက Query က Run နေတာကြာနေပြီးတော့ Timeout ပေးထားတဲ့အချိန်အတွင်းမှာ မပြီးတဲ့အတွက်ြဖစ်တာ ASP က Default Timeout က စက္ကန့် ၃၀ ြဖစ်လိမ့်မယ် အဲဒါထက်ကျော်ရင် timeout error ထွက်လာလိမ့်မယ်။ အဲဒီတော့ ၂ နည်းရှိတယ် Timeout ကို တိုးပေးရင်ပေး ဒါမှမဟုတ် Query ကိုမြန်အောင် လုပ်ချင်လုပ်။ Timeout ကိုတိုးပေးချင်ရင်တော့ အောက်မှာပြထားတဲ့ URL မှာဖတ်ကြည့်ပါ အချိန်ပဲတိုးပေးတာဆိုတော့ ဘာကြောင့်ဆိုတာ ရှင်းပြစရာမလိုလောက်ပါဘူး။
sp_updatestats ဆိုတဲ့ Stored Procedure က Database ထဲမှာရှိတဲ့ Table အားလုံးရဲ့ Statistics တွေကို Update လုပ်တဲ့ Stored Procedure ပါ Run လိုက်လို့တော့ အန္တရာယ်မရှိတဲ့ Command ပါ။ Run တာကတော့ SQL Server Management Studio ထဲက Query ရေးတဲ့နေရာကနေ ကိုယ်သုံးမယ့် Database ကို ရွေးပြီးတာနဲ့ execute လုပ်လို့ရတယ်။
တစ်ခုစဉ်းစားရမှာက sp_updatestats ဆိုတာက အပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့ ၂ ချက်ထဲက Query မြန်အောင်လို့လို့ ရည်ရွယ်ပြီးအကြံပေးနေတာဖြစ်မယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့် Statistics Update ဖြစ်နေရင် Query Plan က Efficient ဖြစ်တဲ့အတွက် မြန်တယ်လို့ယူဆလို့ရတယ် ဒါပေမယ့် အများအားဖြင့် Query နှေးရခြင်းအဓိကအကြောင်းအရာတွေမှာ Statistics ကနောက်ဆုံးအချက်ပါ။
Optimization အတွက် အလွယ်ဆုံးအကြံပေးရရင် ကိုယ်ရေးထားတဲ့ Query ကိုပြန်ကြည့်ပါ အင်မတန် ရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေး ရေးထားရင် ပြင်ရေးလို့ရရင်ပြင်ရေး နောက်ပြီးတော့ Query ထဲမှာသုံးထားတဲ့ WHERE clause ထဲမှာသုံးထားတဲ့ Column တွေမှာ Index မရှိသေးရင် အဲဒီ့ Column တွေပေါ်မှာ Index Create လုပ်ပေး အဲဒါဆိုရင် မြန်လာပါလိမ့်မယ်။ Index ရှိရင်မြန်တယ်ဆိုပြီးတော့ Column တိုင်းကိုတော့ Index တွေ Create လိုက်တော့မလုပ်နဲ့ လိုအပ်တဲ့နေရာပဲသုံးပါ ရှာတာမြန်ပေမယ့် Insert, Update, Delete မှာ အရမ်းနှေးသွားပါလိမ့်မယ်။
အဲဒါတွေအရင်စမ်းကြည့်ပါ အဲဒါမှမမြန်သေးဘူးဆိုရင်တော့ INSERT, UPDATE, DELETE များသလား SELECT ပဲများတာလားရယ် ခန့်မှန်းခြေတစ်စက္ကန့်ကို Query ဘယ်လောက်ဝင်သလဲ နောက်ပြီးတော့ Query နမူနာယူလာခဲ့ပါ နောက်ပြီးတော့ Database Schema ကိုလည်းပြရလိမ့်မယ် အဲဒါဆိုရင်တော့ ထပ်ပြီးတော့ အကြံပေးလို့ရပါလိမ့်မယ် အဲဒါမှမရသေးရင်တော့ Run ရမယ့် Query တချို့ပေးပြီးတော့ ထွက်လာမယ့် Result တွေကိုတွေ့မှပဲ ပြောလို့ရတော့မယ်။ အဲလောက်တော့ လိုမယ်မထင်ပါဘူး Timeout နဲ့ လိုအပ်တဲ့ Index နည်းနည်း Create လုပ်ပေးလိုက်ရင် ရမှာပါ။
(၁) CommandTimeout ကို 360 ထားလိုက်ပါတယ် ။
(၂) ရှင်းပြထားသလို exec sp_updatestats ကိုသုံးမဲ့ Database ရွေးပြီးတာနဲ့ Execute လုပ်တာ ဒီ Error တက်ပါတယ် ။
Msg 15247, Level 16, State 1, Procedure sp_updatestats, Line 1
Google ကြည့်တော့ အောက်က Comment ကို Run ခိုင်းပါတယ်။
Successful တော့ဖြစ်သွားပါတယ် ။ Programmability > Stored Procedures ရဲ့အောက်မှာ dbo.up_updstats ဆိုပြီးရှိသွားတယ် ။ အဲဒါမှန်လားမသိဘူး ။ dbo.up_updstats က သုံးမဲ့ Table Name လားမသိဘူး ။ စစ က dbo.ClassroomSchedule လို့ရိုက်တာ ရှိနေပြီးသားပြောလို့ dbo.up_updstats နဲ့လုပ်တာ အဆင်ပြေသွားပါတယ် ။
(၃) Index ကို Create လုပ်တာ Successful ဖြစ်ပါတယ် ။
လုပ်ရတဲ့ Project က INSERT, UPDATE, DELETE မလိုပါဘူး ။ User ကို Data ပြရုံပါဘဲ ။ Classroom Digital Signage အတွက်သုံးတာပါ ။
လက်ရှိအချိန်နဲ့ Classroom Level ပေါ်မူတည်ပြီး ၇ စက္ကန့်တခါ Signage ကပြောင်းတာပါ ။ Each Level မှာအများဆုံး ၁၅ ခန်းရှိပါတယ် ။ Query တခါပတ်ရင် အများဆုံး Record ၁၅ ထွက်ပါတယ် ။ Level ကအများဆုံး ၆ထပ်ရှိနိုင်ပါတယ် ။ မနေ့က မနက် ၉ နာရီဝန်းကျင်က စ ပြီး Run တာ ညနေ ၅နာရီ ဝန်းကျင်လောက်ကျတော့ အဲဒီ wait operation timeout တက်ပါတယ် ။
SELECT * FROM [ClassroomSchedule] WHERE Classroom like '" + rlevel_count + "%' AND DateofTeaching like '" + rlevel_cDate + "%' AND TimeStart >= '1754-01-01 " + sFrom + ":00.000' AND TimeEnd <= '1754-01-01 " + sTo + ":00.000' AND SeminarDisplay is not NULL AND SeminarDisplay <> '' ORDER BY Classroom ASC
SELECT * လို့သာ သုံးထားတာ User ကိုပြတာက ClassName နဲ့ Classroom ဘဲရှိပါတယ် ။ SELECT ClassName, Classroom ဆိုပြီးထုတ်ရင် ပိုမြန်နိုင်လားမသိဘူး ။ Table မှာ စုစုပေါင်း Column ၃၇ ခုရှိပါတယ် ။
Broအခုလိုသေသေချာချာရှင်းပြပေးလို့ အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။
ဟုတ်တယ် sp_updatestats ကို Run ဖို့ဆိုတာက လူတိုင်းလုပ်လို့မရဘူး Permission လိုပါတယ် Execute လုပ်မယ့်လူဟာ DBO ဒါမှမဟုတ် sysadmin role မှာပါတဲ့ Member ဖြစ်မှရတယ် အခုက execute as 'dbo' နဲ့ stored procedure တစ်ခုနဲ့ sp_updatestats ကို execute လုပ်တာဆိုတော့ DBO အနေနဲ့ impersonate လုပ်တာလို့ခေါ်တယ် အတူတူပါပဲ အလုပ်လုပ်ပါတယ်။
အခုကရသွားပြီလား မရသေးဘူးဆိုရင် ClassroomSchedule ဆိုတဲ့ Table ရဲ့ Schema ကိုပြပါ Column Lists, Data Types & Constraints, Existing Index Lists အဲဒါတွေကိုပြော ကြည့်ရတာက Query က Table တစ်ခုထဲနဲ့ရှင်းရှင်းလေးပါ လိုအပ်တဲ့ Index တစ်ခုနှစ်ခုထည့်ရုံပါပဲ အဲဒါဆိုရင်မြန်မှာပါ Data Type and Constraint တွေမသိတော့ အကြံပေးလို့မရသေးဘူး နောက်တစ်ခုက ကိုယ်ကဖတ်တာဆိုပေမယ့် တခြားဘက်ကနေ လာရေးနေတာတခုရှိတယ် မဟုတ်လား အဲဒီ့တစ်ခုက ၇ စက္ကန့်တစ်ခါလာ ရေးနေတာလား။
Brother ပြောထားတဲ့အချက်တွေအတိုင်းတော့ အကုန်လုပ်ပြီးပါပြီ ။
ရုံးကဆိုဒ်ကို အိမ်ကနေသုံးရင်အခက်ခဲရှိနေလို့ သေချာမစမ်းသပ်ဖြစ်သေးပါဘူး ။
အခုညကနေ မနက်ဖြန်မနက်အထိ Page ကို တောက်လျှောက် Test Run ထားကြည့်ပြီးရင် မနက်ဖြန်မနက်လောက်တော့ အဆင်ပြေ မပြေသိရမယ် ထင်ပါတယ် ။
တဖက်ကနေလာရေးတာရှိပါတယ် ။ အဲဒါက Scheduler တွေကို Add, Upload multiple, Change, Delete, View Bookings ပေးလုပ်ထားတာပါ ။ ၇ စက္ကန့် တခါတော့ရေးလောက်မယ်တော့မထင်ပါဘူး ။ ဒါပေမဲ့ တခါတလေ လူအများကြီးက တပြိုင်နက်ထဲဝိုင်းသုံးတာမျိုးတွေရှိနိုင်တော့ စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း Database ကိုပြိုင်ချိတ်နေတာမျိုးတော့ ရှိလောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ် ။ အားလုံးက အဲဒီ database တခုထဲကိုဘဲ ချိတ်သွားတာပါ ။ အဲလိုမျိုးဆိုရင် အခက်ခဲများရှိနိုင်လားမသိဘူး ။ အစကတော့ သူတို့က Digital Signage အတွက် သက်သက် Database တခု ထားထားပါတယ် ။ Daily အချိန် ၃ချိန်ပိုင်းပြီး အဲဒီ သီးသန့်ထားထားတဲ့ Database ကို သွား ကော်ပီလုပ်ပေးပါတယ် ။ အခုကတော့ direct Database ကိုတန်းချိတ်တာပါ ။ ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲမသိသေးပါဘူး ။ အခြေထူးရင် ထပ်တင်ပါအုန်းမယ် ။